Global Voices teny Malagasy » Midedaka i Siberia, sempotra i Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Septambra 2019 16:11 GMT 1	 · Mpanoratra Maxim Edwards Nandika (fr) i Amina Grine, Sylvia Aimée
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Voina, Akon'ny RuNet
Mpamono afo miady amin'ny doro ala ao Siberia. Avy amin'ny lahatsary YouTube-n'ny fantsombaovao Euronews “Лесные пожары не тушат из-за экономии средств ”
Fahamaizana goavana no mamely ny ala ao Siberia, indrindra any amin'ny faritr'ireo repoblikan'i Bouriatie [fr] , sy Sakha [fr]  ary manodidina an'i Irkoutsk sy Krasnoïarsk. Araka ny ambaran'ny Greenpeace, mihoatra ny efatra tapitrisa hektara no mirehitra , izany hoe mbola lehibe lavitra noho ny haben'i Belzika. Ireo ala borealy midadasika, matetika antsoina hoe “havokavoky ny ilabolantany avaratra” no tena tandindonin-doza.
Efa ho roa herinandro izao, mivoaka eny anaty tambajotra rosiàna ireo sarinà ala midedaka sy ireo sary azo amin'ny zanabolana mampiseho ny halehiben'ny fahamaizana, arahan'ireo tenifototra #сибирьгорит  (“midedaka i Siberia”), #гориттайга  (“midedaka ny taïga “), #потушитесибирь , (“Vonoy ny afo ao Siberia”) ary #мирспасисибирь  (“Hamonjy an'i Siberia anie izao tontolo izao”)
Masiaka ireo fanehoankevitra noho ireo manampahefana ao an-toerana nitaredretra tsy nanao mialoha ny famonoana ny afo. Na dia tsy zava-baovao any Siberia aza izy ireny, ireo mpahay toetrandro dia nanambara  fa niely tamin'ny fomba nivatravatra be ny tamin'ity taona ity noho ny fifangaroan'ny rivotra mahery sy ny lohataona mafàna loatra tsy toy ny mahazatra. Ny fitavozavozàna nandray andraikitra koa dia mety azo hazavaina amin'ny hoe satria faritra lavitra no niharan'ireo firehetana.
Ho an'i Alexander Uss [ru] , governoran'ny faritra Krasnoïarsk, tsy dia fanao loatra ny miady amin'ireo firehetana any amin'ny faritra lavitra be. Nandritra ny antsafa iray tao amin'ny vovonan'ny tanora nokarakaraina tany amin'ny oniversite siberiàna iray tamin'ny 29 Jolay, nampian'i A. Uss hoe “misolo ho azy amin'ny fomba natoraly eo ny ala”, sy hoe ireo firehetana any an'ala dia “tranga voajanahary efa mahazatra” sy hoe ny fiadiana amin'izy ireny dia “tsy misy dikany ary  mety handoza / hankarary aza ny fanandramana hanao izany”.
Saingy ny vanja tsy mirehitra irery. Tato anatin'ny andro vitsivitsy farany, tafakatra teny ambonin'ireo tanàna siberiàna ireny setroka ireny; toa an'i Novossibirsk sy Tomsk, toerana izay nilazan'ireo mpiasan'ny fahasalamàna ny fisianà fitomboan'ny  antso filàna fiara mpitatitra marary ho an'ireo tratry ny fiakaran'ny tosidrà noho ny fahalotoan'ny rivotra. Ireo mponina farany lavitra any andrefana noho i Tatarstan sy koa any atsimo lavitra noho i Kazakhstan dia nilaza ihany koa ny fisianà fahasarotana amin'ny fisefoana ; amin'ny Instagram, mizara sarinà setroka matevina any amin'ny faritra misy azy ry zareo . Ny hafa indray mizara sarintena ahitàna azy ireo mitondra sarontava manampy amin'ny fisefoana [ru],  misy soratra hoe “Midedaka i Siberia”.
Vehivavy iray mpampiasa aterineto no mizara ny zavatra iainan'ireo havany akaiky monina any amin'ny tanàna iray ao amin'ny faritr'i Irkoutsk :
Vao avy niresaka tamin'ny rahavaviko aho, monina sy miasa ao Ust-Ilimsk izy. Tena tsy azo ifohan-drivotra any ; Mihidy an-trano daholo ny olona, miaraka amina fitaovana fanamandoana rivotra ary mijaly ny rehetra. Tsy mahita vaovao mihitsy aho momba ireo niharam-boina (ary nandritra ireo firehetana, matetika tsy ny afo no mahafaty ireo mponina fa ny [olana any amin'ny fo], tsarovy ilay firehetana nitranga tao Rosia afovoany tamin'ny 2011.
Vehivavy iray hafa mpampiasa aterineto no nanoratra tatitra mampivarahontsana momba ny miandry ireo mponina any amin'ireny faritra ireny :
Zavona matevina be no mandrakotra ireo toerana fonenana any andrefan'ireo ala mirehitra. Setroka misy poizina avy amin'ireo firehetana no fohan'ny olona. Angamba fantatrareo fa, rehefa miditra anaty faritra iray anjakan'ny afo ireo mpamono afo, mitondra sarontava manokana ry zareo mba tsy ho sempotry ny ‘monoxyde de carbone’. Izany no antony anoroana hevitra mba ho elanelanina lamba mando ny orona rehefa mifoka rivotra rehefa misy firehetana. Saingy fanao izany rehefa tranobe iray monja no iharan'ny firehetana, toerana izay afaka andosirana mba hifohana rivotra madio. Fa ankehitriny, mandrakotra ala midadasika be ireo afo ary ny setroka avy amin'ireny firehetana ireny dia mivelatra amina kilaometatra an'aliny maro. Tsy mbola misy olona natomboka nesorina, tena miaritra ny mafy tokoa izy ireo. […] Betsaka ireo soritraretina no tsy tonga dia miseho avy hatrany, fa afaka herinandro maro any aoriana. Baomba miasa miadana io.
Boriaty mpanao gazety monina any Saint-Pétersbourg i Alexandra Gamarzhapova, izay nilaza ny olana any amin'ny faritra niaviany:
Я присоединяюсь ко флешмобу #сибирьгорит  и верю, что если нас, неравнодушных, будет миллионы, власти начнут борьбу с огнем.
Maherin'ny telo tapitrisa hektara no midedaka ao Siberia amin'izao fotoana izao. Napetraka aty Boriatia, faritra misy ahy, ny tany latsaka an-katerena.
Efa mahazatra anay ny tsy fifampiraharahian'ny olona (ireo mpiasam-panjakana mandà tsy hamono ilay afo: mijaly miaraka aminareo izahay), nefa nahoana ireo biby sy ny ala no tsy maintsy hijaly ?
Biby an-jatony maro no maty amin'izao fotoana izao, satria ve misy lehilahy iray miteny fa lafo loatra ny sandan'ny famonoana ireo firehetana ?
Miombona hevitra amin'ilay hetsika tselatra #MidedakaSiberia aho ary heveriko fa raha an-tapitrisa amintsika no tsy hanamaivana (an'io), hanomboka hamono ny afo ry manampahefana.
P.S. Tsy mbola managadra olona noho ny resaka hetsika tselatra anaty tontolo virtoaly aloha izao ry zareo, noho izany, tongava ianao hanatevina laharana anay.
Mbola vao ny antony vitsivitsy monja ireo, izay mahatonga an'i Alexander Uss ho angamba ny olona tsy dia tiana loatra ao Rosia amin'izao fotoana izao. Io koa no antony nahatonga ireo olona 780 000 nanao sonia ny fanangonantsonia iray tety anaty aterineto tamin'ny 31 Jolay, nitakiana ny governemanta hametraka ao Siberia ny fepetra fanao amin'ny tany latsaka an-katerena [ru]. 
Na izany aza anefa, manana fototra araka ny lalàna ireo fanambarana nataon'i A. Uss. Araka ny nanamarihan'ilay  [ros] gazety rosiana Vedomosti mpiseho isanandro azy, “faritra fanarahamaso” ireo faritra lavitra nitrangan'ny firehetana, fomba fiteny nampidirina tany amin'ny taona 2015. Noho ny fahalaviran'izy ireny miala amin'ireo faritra misy mponina sy ireo fotodrafitrasa saropady, tsy voatery hiady amin'ireo firehetana ala any amin'ireny faritra ireny ireo manampahefana any an-toerana, fomba iray ahafahan-dry zareo mitsitsy vola sy fitaovana. Grigory Kukshine, avy amin'ny Greenpeace, anefa nanipîka tao amin'ny [ru]  Sibir.Realii fa lavitry ny afo ny kitay raha ireo faritra fanarahamaso no andrasana hisy mponina ary manakaiky ny 90% amin'ireo firehetana ala ao Rosia tamin'ny lohataona lasa dia tany amin'ireny faritra ireny no nipoirany. Ny Douma- mpanjakana, parlemanta rosiàna, dia maminavina ny hiverina handinika [ru]  ireo “faritra fanarahamaso”.
Araka izany, manomboka mamaly ny fangatahan'ny vahoaka ireo manampahefana. Tamin'ny 29 Jolay, ny Rosleskhoz, masoivoho rosiàna momba ny ala, dia nilaza [ru]  hoe efa nanomboka namono ny afo ireo sampana sy fiaramanidina an'ny tafika. Saingy tena kely ihany izany ary efa taraiky. Toy izay nitranga nandritra ireo tondradrano tany amin'ny faritra Irkoutsk, ao Siberia, efa ampifandraisin'ireo mpaneho hevitra sahady aminà olana midadasika kokoa momba ny maha-tomponandraikitra sy ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fanjakana ilay valiny nasetrin'ny governemanta. Manampy trotraka an'io toedraharaha io ny tolotra fanampiana ho an'i Gresy avy amin'ny filoha rosiàna Vladimir Poutine mba hiadiana amin'ireo firehetana ala tamin'ny 24 Jolay [ru]. 
Vakio koa : Tondradrano niteraka faty olona tao Siberia: miampanga ry zareo Rosiàna [fr] 
Zavadehibe ny manamarika fa betsaka amin'ireo faritra voadona no mijaly sahady amin'ny olana ara-ekolojika, izay midika fa ireo hetsika ekolojika efa misy (toy ny hetsika “Lanitra madio”  ao Krasnoïarsk hanoherana ny fahalotoan'ny rivotra) dia nitàna anjara toerana lehibe tamin'ny fanetsehana ireo mponina mba hahatonga ny feon-dry zareo hisy mpihaino.
Araka izany ny hevitra hoe “tsy ahitàna tombony ara-toekarena” ny ady atao amin'ireo firehetana ala dia manakoako any amin'ireo olona miahiahy ny fomba nijeren'ny governemanta ireo olan-dry zareo tany aloha. Raha ny marina, io fehezanteny io dia lasa fanadrohadroana iray [ru],  ao anatin'ny fanahy iray tsy misy hafa amin'ny an'i Dmitri Medvedev : “Tsy misy ny vola, nefa mijoroa ary mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo” , hoy ny nambaran'ny praiminisitra rosiàna tamin'ireo mpiasa mpisotro ronono tao Krimea tamin'ny 2016.
Tenenin-dry zareo amintsika fa tsy ahazoana tombony ny mamono ny afo ao amin'ny taïga ao Krasnoïarsk. Nefa ahazoana tombony ve ny an-tapitrisa amin'ireo karaman'i Setchine, Miller, Kostine ? Sa angamba ny fanorenana toeram-ponenana vaovao ho an'i Kirill [rain'ny finoana ortôdôksa rosiana] efa ho telo lavitrisa robla, ahazoana tombony ve izany? Fa mivadik'atidoha daholo ve ianareo eto Rosia e ? Adinonareo ve hoe iza no namonjy ny vodinareo tamin'ny vahohon'ireo fasista tamin'ny Desambra 1941? Izahay, vahoakan'i Siberia, dia mitaky hetsika goavana mba hamonoana ny afo mandoro ny alanay, amin'ny fampiasàna ireo hery rehetra ananan'ny ministera misahana ny Toerdraharaha Maika sy ny ministeran'ny fiarovam-pirenena.
Toy izany koa, ilay miaramila Mikhail Svetov, izay mitantana fantsona iray malaza ao amin'ny YouTube, dia nampifandray ny tsy fahafaliana momba ireo firehetana ala tamin-javatra hafa mampiasa loha:
Tsy ahazoana tombony ny mamono ny afo ao amin'ny taïga. Saingy ahazoana tombony ny manokana 216 lavitrisa dolara ho entina mikojakoja ny tafika nasiônaly. Ahazoana tombony ny manapoizina ankizy amin'ny toerana fanariampako sy mandefa fako feno poizina any Chiyes. Raha isika miaro an'i Rosia sy ny hoavintsika, ry zareo kosa miady mba hanana zo hamotika ny firenentsika.
Tsy miala amin'ny mahazatra azy, ireo sasany mpampiasa ny aterineto dia namadika ilay tantara ratsy ho lasa vazivazy iray miaraka amin'ny fanahy henjana ananan-dry zareo :
Mifanohitra amin'ny fitiavan-tanindrazana ny miteny hoe “firehetana ala”.
Toy ny efa hain'ny rehetra :
Tsy fipoahana io, fa bolabolan-dandihazo
Tsy tondradrano io, fa fiakaran'ny haavon'ny rano.
Tsy loza an'habakabaka io, fa fipetrahana mahery setra.
Tsy fahantràna io, fa fitomboana vola miditra mankany amin'ny maridrefy miiba.
Izany no antony tsy maha-firehetana ala an'ireny, fa voalin-tsetroka manakona ireo zanabolana mpitsikilo alefan'ny OTAN.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/03/142766/
 Лесные пожары не тушат из-за экономии средств: https://www.youtube.com/watch?v=iyZinE9Hpf0
 Bouriatie [fr]: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouriatie
 Sakha [fr]: https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Sakha
 mihoatra ny efatra tapitrisa hektara no mirehitra: https://www.youtube.com/watch?v=5-BrNrWCrCE
 dia nanambara: https://www.bbc.com/news/world-europe-49125391
 Alexander Uss [ru]: https://news.rambler.ru/fire/42574453-rossiyskiy-gubernator-nazval-bessmyslennoy-borbu-s-lesnymi-pozharami/?updated
 fisianà fitomboan'ny: https://siberiantimes.com/ecology/others/news/more-than-two-million-hectares-on-fire-in-siberia-with-turndra-on-fire-destryoing-the-permafrost/
 sarontava manampy amin'ny fisefoana [ru],: https://takiedela.ru/news/2019/07/29/sibir-gorit/
 29 July 2019: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2381824948563993&set=a.169898079756702&type=3&theater
 30 July 2019: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216718259043300&set=a.1850486576353&type=3&theater
 nanao sonia ny fanangonantsonia iray tety anaty aterineto tamin'ny 31 Jolay, nitakiana ny governemanta hametraka ao Siberia ny fepetra fanao amin'ny tany latsaka an-katerena [ru].: https://www.change.org/p/требуем-ввести-режим-чс-на-всей-территории-сибири-по-лесным-пожарам-июль-2019г
 nanipîka tao amin'ny [ru]: https://www.sibreal.org/a/30066470.html
 dia maminavina ny hiverina handinika [ru]: https://tass.ru/obschestvo/6712020
 dia nilaza [ru]: http://rosleshoz.gov.ru/news/2019-07-29/n4789
 hiadiana amin'ireo firehetana ala tamin'ny 24 Jolay [ru].: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b5700349a79478c460b9dd6
 Tondradrano niteraka faty olona tao Siberia: miampanga ry zareo Rosiàna [fr] : https://fr.globalvoices.org/2019/07/19/238093/
 hetsika “Lanitra madio”: https://vk.com/clearsky24
 dia lasa fanadrohadroana iray [ru],: http://tv2.today/News/Zhit-tozhe-ekonomicheski-nevygodno-reakciya-socsetey-na-otkaz-tushit-lesnye-pozhary-v-sibiri
 Tsy misy ny vola, nefa mijoroa ary mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo”: https://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-36482124
 July 27, 2019: https://echo.msk.ru/blog/day_video/2471707-echo/
 July 27, 2019: https://twitter.com/msvetov/status/1155018229221220353?ref_src=twsrc%5Etfw
 July 30, 2019: https://twitter.com/prof_preobr/status/1156082561266987009?ref_src=twsrc%5Etfw